Aroni anobatidza marambi manomwe (1-4)
VaRevhi vanocheneswa, votanga kushumira (5-22)
Zera rinobvumirwa kushumira semuRevhi (23-26)
8 Jehovha akataura naMozisi, achiti: 2 “Taura naAroni, umuudze kuti, ‘Paunobatidza marambi, marambi acho manomwe anofanira kuvhenekera nzvimbo iri pamberi pechigadziko chemarambi.’”+ 3 Saka Aroni akaita izvi: Akabatidza marambi acho kuti avhenekere nzvimbo yaiva pamberi pechigadziko chemarambi,+ sezvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha. 4 Aya ndiwo magadzirirwo akanga akaitwa chigadziko chemarambi: Chaive chegoridhe chakagadzirwa nesando; chakanga chakagadzirwa nesando+ kubva kuchidzinde chacho kusvikira kumaruva acho akatumbuka. Chigadziko chemarambi chakanga chakagadzirwa maererano nezvakanga zvaratidzwa+ Mozisi naJehovha. 5 Jehovha akataurazve naMozisi, achiti: 6 “Tora vaRevhi pakati pevaIsraeri, uvachenese.+ 7 Unofanira kuvachenesa seizvi: Vasase mvura yekugeza zvivi, uye vanofanira kuveura miviri yavo yese nechisvo, vogeza zvipfeko zvavo, vova vakachena.+ 8 Vachabva vatora mukono wemombe mudiki+ nemupiro wawo wezviyo*+ wefurawa yakatsetseka yakasanganiswa nemafuta, uye utore mumwe mukono mudiki kuti uve chibayiro chechivi.+ 9 Uye unofanira kuuya nevaRevhi pamberi petende rekusanganira, wounganidza ungano yese yevaIsraeri.+ 10 Paunouya nevaRevhi pamberi paJehovha, vaIsraeri vanofanira kuisa maoko avo pamusoro pevaRevhi.+ 11 Uye Aroni anofanira kuuya nevaRevhi* pamberi paJehovha semupiro unovheyeswa+ unobva kuvaIsraeri, uye vachaita basa rekushumira Jehovha.+ 12 “VaRevhi vachabva vaisa maoko avo pamisoro yemikono+ yacho. Kana vadaro vachabva vapa mumwe wacho sechibayiro chechivi uye mumwe wacho sechibayiro chinopisirwa Jehovha kuti chiyananisire+ vaRevhi. 13 Uye uchaita kuti vaRevhi vamire pamberi paAroni nevanakomana vake wovapa* kuna Jehovha semupiro unovheyeswa. 14 Unofanira kutsaura vaRevhi pakati pevaIsraeri, uye vaRevhi vachava vangu.+ 15 Pashure paizvozvo vaRevhi vachapinda kuti vashumire patende rekusanganira. Aya ndiwo machenesero aunofanira kuvaita, wovapa* semupiro unovheyeswa. 16 Nekuti ndakavapiwa sezvipo kubva pavaIsraeri. Ndichavatora kuti vave vangu panzvimbo pematangwe ese evaIsraeri.*+ 17 Nekuti matangwe ese evaIsraeri ndeangu, evanhu neemhuka.+ Ndakaatsaura kuti ave angu pazuva randakarova matangwe ese munyika yeIjipiti.+ 18 Ndichatora vaRevhi panzvimbo pematangwe ese evaIsraeri. 19 Ndichapa vaRevhi sezvipo kuna Aroni nevanakomana vake kubva pavaIsraeri, kuti vaite basa revaIsraeri patende rekusanganira+ uye kuti vayananisire vaIsraeri,+ kuti vaIsraeri varege kuwirwa nedambudziko vaswedera pedyo nenzvimbo tsvene.” 20 Mozisi naAroni neungano yese yevaIsraeri vakaita izvi nevaRevhi. VaIsraeri vakaita nevaRevhi zvese zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha nezvevaRevhi. 21 Saka vaRevhi vakazvinatsa, vakageza zvipfeko zvavo,+ Aroni achibva avapa* semupiro unovheyeswa pamberi paJehovha.+ Aroni akabva avayananisira kuti avachenese.+ 22 Izvozvo zvaitwa, vaRevhi vakaenda kunoita basa ravo patende rekusanganira pamberi paAroni nevanakomana vake. Vakaita navo zvakanga zvarayirwa Mozisi naJehovha pamusoro pevaRevhi. 23 Jehovha akabva ataura naMozisi, achiti: 24 “Uyu ndiwo mutemo unoshandiswa pavaRevhi: Murume ane makore 25 zvichikwira achapinda muboka revaya vanoshanda patende rekusanganira. 25 Asi kana apfuura makore 50, achabuda muboka iri, omira kushumira. 26 Anogona hake kubatsira hama dzake dzinoita mabasa epatende rekusanganira, asi haafaniri kushumira ipapo. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita nevaRevhi nemabasa avo.”+
^ ChiHeb., “kuvheyesa vaRevhi.”
^ ChiHeb., “wovavheyesa.”
^ Kana kuti “ese anozarura zvibereko zvevaIsraeri.”
^ ChiHeb., “avavheyesa.”